Njikwa mkpofu COVID na -ezighi ezi nwere ike ịbawanye mgbasa nje
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Njikwa mkpofu COVID na -ezighi ezi nwere ike ịbawanye mgbasa nje
Akụkọ Ahụike • News • Safety • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Njikwa mkpofu COVID
N'ime nyocha nke National Center for Biotechnology Information (NCBI) mere na US na Mmetụta ọrịa COVID-19 na njikwa mkpofu.
A kọrọ na oria ojoo COVID-19 belatara mmetọ ikuku na mkpọtụ metụtara gburugburu ebe obibi yana ebe obibi ndụ dị mma na saịtị ndị njem.
Mana mmetụta ọnụnọ-ụlọ na usoro mgbochi na njikwa mkpofu bụ ihe na-emenye ụjọ.
Enweghị ike ijikwa mkpofu sitere na ụlọ ọrụ ahụike na ezinụlọ nwere ike gbasaa mgbasa nke COVID-19.
N'ihi ịkwakọba uwe aka, uwe mwụda, ihe mkpuchi, na uwe na akụrụngwa nchedo ndị ọzọ, ọ dị ka enwere ihe mberede mberede n'ihi nrụpụta ihe na -adịghị ahụkebe sitere na ụlọ na ụlọ ọrụ ahụike. Enweghị ike ijikwa mkpofu sitere na ụlọ ahụike yana ezi ụlọ nwere ike ịka njọ mgbasa nke COVID-19 site na nnyefe nke abụọ.
Mgbafu nke nwere ike ịdaba, ọkụ mepere emepe, na nsure ọkụ nwere ike imetụta ogo ikuku na nsonaazụ ahụike n'ihi ikpughe nsị. Ya mere, enwere ihe ịma aka nke ijikwa mkpofu na -adịghị ahụkebe na -eji ihe mkpofu dịnụ na -ebelata mmetọ ikuku, na -egbochi nnyefe nje nke abụọ, na ibelata ihe egwu nwere ike ibute ọrịa.
E kewapụrụ ihe mkpofu Hazmat n'ime akpa uhie maka njirimara dị mfe na mkpofu nke ọma na Pattaya.
Mmiri na-eri na Pattaya n'ime mkpofu COVID-19 dị ize ndụ
Ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị bi na Pattaya 20,000 nọ n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ịnọpụ iche, nsogbu mkpofu ihe egwu nke obodo na -eto ngwa ngwa karịa ikpe coronavirus.
Onye osote onye isi obodo Manote Nongyai kwuru na ihe karịrị tọn asaa kwa ụbọchị nke nkpuchi, ihe nchebe onwe onye, ​​anụ ahụ, na ihe mkpofu na-enweghị atụ nke ndị ọrịa na-eji eme ihe ugbu a. Nke ahụ atụnyere naanị kilogram 7 nke ahịhịa hazmat tupu ebili mmiri nke atọ coronavirus agbawa na Chonburi.
Enwere isi ihe abụọ kpatara mpako. Nke mbụ bụ ọnụọgụ ndị nọ ugbu a n'ụdị nlekọta ahụike ma ọ bụ kwarantaini: 2 na Chonburi niile ruo ụbọchị Wenezde. Mpaghara ahụ kwukwara ikpe ọhụrụ 18,942, gụnyere 974 na Banglamung District, nke gụnyere Pattaya.
Ihe kpatara nke abụọ bụ ọkọlọtọ na -anụ ọkụ n'obi gọọmentị ejirila kewaa ihe dị ka "hazmat". N'ụzọ bụ isi, ihe ọ bụla metụrụ onye nwalere ihe dị mma maka COVID-19-ma ọ bụ ihe mgbaàmà ma ọ bụ na ọ bụghị-ka achọrọ ka etinye ya na rọba na-acha ọbara ọbara ma jikwaa ya nke ọma. Nke ahụ na -agụnye ihe ndị dị otú ahụ dị ka karama ofe dị ọkụ ma ọ bụ mpempe akwụkwọ.
Ọnụ iji tụfuo akpa uhie ndị a bara nnukwu uru. Onye na -ebu ihe mkpofu Pattaya, Eastern Green World Co., na -akwụ 1.5 baht kwa kilogram maka ahịhịa. Otú ọ dị, mkpofu na -efe efe na -efu 24 baht kilogram iji wepu ya.
Nke ahụ ebutela '' ụlọ ọgwụ ''-ụlọ nkwari akụ gbanwere agbanwe na-elekọta ndị ọrịa coronavirus na-arịa obere ọrịa-iji gbanwee ihe mkpofu ha ka ọbọgwụ kwụọ ụgwọ ahụ. E jidere Cholchan Pattaya Beach Resort n'isi mbido ọnwa a ka ọ na -etinye akpa hazmat na -acha ọbara ọbara n'ime akpa ahịhịa oge niile.
Manote kwuru na Pattaya ewepụtala mkpokọta hazmat kama iji Eastern Green World, mana ụlọ ọrụ a na -akpọghị aha enweghị ike ịnagide ebili mmiri nke akpa uhie. Ya mere, a zụrụ ndị ọrụ Eastern Green World otu esi ejikwa ihe mkpofu dị ize ndụ ka ha wee nwee ike iwepụ ihe mkpofu coronavirus kwa.
Manote kwuru na ọ dị mkpa ka anakọta akpa hazmat niile n'ime otu izu, yabụ na ọ ga -ewe ihe karịrị otu ụlọ ọrụ ime ya.
Onye osote onye isi obodo kwusiri ike na ọ dị mkpa ka ọha na eze kpachapụ anya n'ịhazi ahịhịa ka onye ọ bụla nọ na iche iche ma ọ bụ kewapụrụ n'ụlọ na -ejikwa akpa hazmat uhie.